फेरी लोक सेवा अगाडि प्रदर्शन, के हुन्छ भोलीको परिक्षा ?::Nepal Online News Portal
फेरी लोक सेवा अगाडि प्रदर्शन, के हुन्छ भोलीको परिक्षा ?
आज फेरी स्थानीय तह विज्ञापन परीक्षाको अघिल्लो दिन लोक सेवा आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । आदीवासी जनजाती महासंघ लगायतका विभिन्न संघ सस्थाले आयोग कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनकारीले सडक छेकेर प्रदर्शन गरेपछि केहीबेर सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो । प्रदर्शनले तनावको अवस्था सिर्जना भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर प्रदर्शनकारीलाई हटाएपछि अवस्था सामान्य बनेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको जिकिरसहित रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनलाई यही वैधानिकता दिने निर्णय गरेपछि अब परीक्षामा कुनै बाधा नहुने भएको हो।
स्थानीय तह अन्तर्गत खोलिएको विज्ञापनको भोलि शुक्रबार पहिलो चरणको परीक्षा हुँदैछ ।
Email : topkhabar[email protected]